Ndeapi magineti zvigadzirwa atinogona kuwana kubva kuMeiko Magnetics?
Meiko Magneticsinyanzvi uye inotungamira magineti zvigadzirwa mugadziri & ekisipota muChina. Zvigadzirwa zvedu zvinotangira kubva kubhedhi neodymium magineti kune anoenderana magineti magungano mune akasiyana maumbirwo, mashandiro uye mashandisiro. Kupfuura zviuru zviviri zvemhando dzemagineti zvinhu zvinosarudzika.
Sei pamusoro wako magineti unhu?
Isu tinovavarira kupa yakakwira-inokwanisa magineti zvigadzirwa ne GORE ROKUVIMBA, kusanganisa chero chakaipa uye chekukuvadza chinokuvadza. Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvinhu zvedu zvemagineti. Muwarandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese.
Mitengo yedu inochinjika zvichienderana nekuwanikwa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Asi sezvo isu takatangwa nemagineti zvigadzirwa manfacturer yakavakirwa muChina, tinogona kupa yakanaka yemakwikwi mutengo wekuchengetedza yako mutengo.
Ehe, isu tinoda ese maodha epasi rese kuti ave neinoramba ichienderera shoma odha huwandu. Asi kana zviyero zvakaenzana zvinhu zviri mudura, hapana MOQ yekutanga odha. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndokumbirawo ubate nesu.
Ehe, isu tinogona kupa akawanda magwaro anosanganisira Testing Chirevo, Zvitupa zveKuongorora / Kuenderana, Inishuwarenzi, Chibviro, uye mamwe magwaro ekutumira anodiwa.
Kazhinji mumazuva 7-15 ekutakura. Kana muzvinhu zvakajairwa, tinogona kuzvinunura mumazuva matatu. Kune sampuli nyowani, iyo nguva yekutungamira ingangoita mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzinotungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.